Saafi Films - News: Rag uu ku jiro nin la dhashay Madaxweynihii Benin oo loo haysto in ay sumeeyeen Madaxweynahaas
Rag uu ku jiro nin la dhashay Madaxweynihii Benin oo loo haysto in ay sumeeyeen Madaxweynahaas
Sedex ruux ayaa loo xiray dilkii loo gaystay madaxweynihii hore e dalka Benin Thomas Boni Yayi waxaana lasheegay in dilkiisa loo adeegsaday sun loogu daray daawadii uu isticmaali jiray, sidaas waxaa sheegay maxkamada dalkaas.
Dhaqtarkii Madaxweynaha, mid kamid ah Walaalihiis iyo wasiirkii hore ee dhaqaalaha ayaa loo haystaa dilka madaxweynaha sida laga soo xigtay Saraakiisha.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Walaalkii Madaxweynaha iyo dhaqtarkiisiiba lasiiyay lacag dhan 1bn CFA francs oo udhiganta (�1.2m; $2m) si ay usumeeyaan.
Ragaan dilka loo haysto ayaa lagu kala magacaabaa Dr Ibrahim Mama Cisse oo ahaa walaalka madaxweynaha, dhaqatarkii madaxweynaha Zouberath Kora-Seke iyo Wasiirkii hore ee dhaqaalaha Moudjaidou Soumanou.
Waxaa kale oo ay dacwad oogayaasha dalbadeen in lasoo xiro ganacsade Patrice Talon oo isagana wax ka abaabulay qorshaha lagu dilay madaxweynaha
Qaar kamid ah raga danbigaas loo haysto ayaa dhimashadii madaxweynaha kadib ka cararay dalkaas.
Madaxweynihii dhintay Mr Yayi ayaa ku jiray da�da 60-ka sano waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee doorasho kusoo gala dalkaas 2006-dii, dib ayaana loo doortay sanadkii lasoo dhaafay, waxaana sidoo kale uu ahaa gudoomiyaha sanadlaha ah ee midowga Afrika.
nasro on October 24 2012 ·
4,555,124 unique visits